Ny vazaha nalain'ny olona nitam-piadiana tao amin'ny hotely Meksikana novonjen'ny polisy
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Ny vazaha nalain'ny olona nitam-piadiana tao amin'ny hotely Meksikana novonjen'ny polisy
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao Mafana Kuba • Vaovaom-panjakana • Haiti Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra Meksikana dia ahitana Meksikana 16 sy teratany vahiny 22 ny vondron'ireo nalaina ankeriny, ary zaza telo sy vehivavy bevohoka iray no isan'izy ireo.
Andiana teratany vahiny nalaina ankeriny tao amin'ny hotely any avaratr'i Mexico.
Hitan'ny polisy meksikanina velona ireo tra-boina taty aoriana ary nilaozan'ny mpaka an-keriny.
22 ny Haitiana sy ny Kiobàna dia mety ho mpikatsaka fialokalofana na mpifindra monina.
Vondrona Meksikana 16 sy Haitiana 22 ary Kioban XNUMX no voavonjy taorian'ny fakana an-keriny azy ireo avy tao amin'ny Hotel Sol y Luna tao an-tanànan'i Matehuala, any amin'ny fanjakan'ny San Luis Potosi any Mexico.
Nanambara ny lehiben'ny fampanoavana ao amin'ny fanjakana fa hitan'ny polisy velona velona teo amoron-dalana ireo niharam-boina, toa nafoin'ireo naka an-keriny azy ireo.
Araka ny filazan'ny mpampanoa lalàna Federico Garza Herrera, Meksikana 16 sy teratany vahiny 22 no ao anatin'io vondrona io, ary zaza telo sy vehivavy bevohoka iray no isan'izy ireo.
Tsy fantatra mazava raha mitady fialokalofana ireo na vahiny mpifindra monina.
Ny tatitra voalohany dia nilaza fa Venezoeliana sasany no nisy naka an-keriny.
Ny manampahefana Meksikana misahana ny fifindra-monina dia nanamarina ny satan'izy ireo Meksika rehefa niasa ny tompon'andraikitra polisy mba hitady ny antony manosika ny fakana an-keriny.
Tao amin'ny Matehuala hotely talata talata.
Nilaza ny mpampanoa lalàna fa fiara tsy mataho-dàlana telo nitondra lehilahy mitam-piadiana no tonga talohan'ny maraina tao amin'ny Hotel Sol y Luna ary naka an-keriny ireo vahiny.
Ny sasany tamin'ireo antontan-taratasin'ireo niharam-boina dia hita tao anaty efitrano. Toa naka ny vatan-kafitsin'ny hotely ihany koa ireo naka an-keriny.
Ireo nalaina ankeriny dia hitan'ny Zandarimariam-pirenena sy ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny arabe ivel an'i Matehuala taorian'ny nilazan'ny mpiantso iray fa misy andian'olona mangataka fanampiana eny an-dalana.